Niara-nandeha Tamin’​Andriamanitra i Noa | Tahafo ny Finoan’​izy Ireo
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Armenianina (Andrefana) Aymara Bichlamar Boligara Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitumbuka Cinghalais Dangme Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Ga Garifuna Grika Groenlandey Guarani Géorgien Hebreo Hiligaynon Holandey Hongroà Ibo Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Isoko Italianina Japoney Kantôney Nentim-paharazana Kikongo Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kongo Koreanina Kreôla any Haïti Kreôla any Seychelles Kroaty Kwangali Letonianina Lingala Litoanianina Luo Malagasy Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Maya Mazateky (Huautla) Mixe (Afovoany) Mizo Myama Nahuatl (Puebla Avaratra) Ngabere Norvezianina Nzema Ossète Ourdou Papiamento (Curaçao) Pendjabi Persianina Poloney Portogey (Brezila) Quechua (Bolivia) Rarotonga Romanianina Rosianina Samoanina Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinoa (Yunnan) Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Tagalog Tahisianina Tailandey Tatar Tigrigna Tiorka Tiv Tseky Tshiluba Tsonga Twi Tzotzil Vietnamianina Wayuunaiki Xhosa Yorobà Zoloa Éwé
VIZANA i Noa sady manakotsako daholo ny vatany, ka henjaniny ny lamosiny sy ny hozany. Maka aina kely eo ambony vatan-kazo izy avy eo sady mandinika ny hangezan’ilay sambofiara. Entin’ny rivotra ny fofona godorao vao mafana ary manakoako ny feon’ireo fitaovana fandrafetana. Tazan’i Noa ny zanany lahy samy miasa mafy mandrafitra tsikelikely an’ilay sambofiara. Efa aman-taonany izao izy mivady sy ny zanany lahy ary ny vinantovaviny no niara-nanamboatra an’ilay izy. Efa be dia be ny asa vitan’izy ireo nefa mbola be dia be koa ny asa miandry!
Nihevitra ny mpiara-monina fa lasa adala izy mianakavy kely. Arakaraka ny nitsanganan’ilay sambofiara no nahatonga ny olona nihomehy, satria tsy nino mihitsy izy ireo hoe ho safotry ny rano ny tany manontolo. Toa tsy nitombina mihitsy tamin’izy ireo ilay fampitandremana naverimberin’i Noa hoe hisy Safodrano. Nihevitra ry zareo hoe nandany fotoana be tamin’ny zavatra tsy nisy nilana azy ry Noa. I Jehovah, ilay Andriamanitr’i Noa, kosa anefa tsy mba nieritreritra toy izany.
Milaza ny Baiboly fa “niara-nandeha tamin’Andriamanitra” i Noa. (Genesisy 6:9) Tsy hoe nanketỳ an-tany akory Andriamanitra na hoe nankany an-danitra i Noa. Midika kosa izany hoe tena tia an’i Jehovah izy sady nankatò azy an-tsakany sy an-davany, ka toy ny mpinamana niara-nandeha izy ireo. Taona maro taorian’izay, dia hoy ny Baiboly momba an’i Noa: ‘Ny finoany no nanamelohany an’izao tontolo izao.’ (Hebreo 11:7) Inona no dikan’izany? Ary inona no ianarantsika avy amin’ny finoan’i Noa?
TSY NISY TSINY NA DIA RATSY FANAHY AZA NY MANODIDINA AZY
Niara-nandeha tamin’Andriamanitra koa i Enoka, dadan’ny dadaben’i Noa. Efa hatramin’izany no nanao ratsy ny olona, ka nilaza i Enoka fa hampihatra ny didim-pitsarany Andriamanitra. Mbola ratsy lavitra noho ny tamin’izany anefa ny olona tamin’ny andron’i Noa ka vetivety dia lasa be dia be ny faharatsiana. Simba ny tany tamin’i Jehovah satria feno herisetra. (Genesisy 5:22; 6:11; Joda 14, 15) Fa inona no nitranga?
Loza no nafitsoky ny anjely sasany tany an-danitra. Efa nikomy tamin’i Jehovah ny iray tamin’izy ireo ka lasa Satana Devoly. Nanendrikendrika an’Andriamanitra izy ary nitaona an’i Adama sy Eva hanota. Nandika ny fitsipik’i Jehovah koa anefa ny anjely sasany, tamin’ny andron’i Noa. Nahita vehivavy tsara tarehy tetỳ an-tany izy ireo, ka nilaozany ny andraikitra nomen’i Jehovah azy tany an-danitra. Niova ho olombelona izy ireo ary nanambady an’ireo vehivavy ireo. Nitaona ny olona hanao ratsy ireo anjely tia tena sy nanambony tena ireo.—Genesisy 3:1-5; 6:1, 2; Joda 6, 7.
Tsy natao hivady koa ny anjely sy ny olombelona ka lasa niteraka metisy natanjaka sy goavam-be izy ireo. Antsoin’ny Baiboly hoe Nefilima na “Mpanjera” ireny metisy ireny, izany hoe mampianjera ny hafa. Nahery setra sy mpampijaly kely ny Nefilima ka nahatonga ny tany ho feno herisetra sy faharatsiana. Tsy mahagaga raha nilaza ilay Mpamorona hoe: “Be ny faharatsian’ny olona teto an-tany, ary zava-dratsy foana koa no nalehan’ny sainy.” Tapa-kevitra àry i Jehovah tamin’izay fa handringana an’ilay tontolo ratsy, rehefa afaka 120 taona.—Genesisy 6:3-5.
Tsy maintsy niezaka niaro ny zanany tsy ho voataona hanao ratsy i Noa sy ny vadiny
Azo antoka fa sarotra ny nitaiza tamin’izany. Soa ihany fa tsara toetra ny vadin’i Noa. Niteraka an’i Sema sy Hama ary Jafeta izy ireo, tamin’i Noa 500 taona. * Tsy maintsy niezaka niaro an’ireo zanany lahy ireo tsy ho voataona hanao ratsy izy mivady. Matetika no mahavariana ny ankizilahikely sady tena tiany ny mahita lehilahy matanjaka be sady malaza. Hoatr’izany mihitsy anefa ny Nefilima. Azo antoka fa niresaka ny zavatra nataon’izy ireny ny olona. Tsy ho vitan’i Noa mivady mihitsy ny hanakana ny zanany tsy haheno an’izany. Ny azon’izy ireo natao dia ny nampianatra ny zanany ny marina momba an’i Jehovah, ilay mankahala ny ratsy rehetra. Tsy maintsy nampianatra ny zanany izy ireo hoe nalahelo ny fon’i Jehovah nahita ny herisetra sy ny olona tsy tia nankatò.—Genesisy 6:6.
Mahatakatra tsara izay nanjo an-dry Noa angamba ny ray aman-dreny amin’izao. Mahery setra sy tsy tia mankatò koa mantsy ny olona manodidina antsika. Feno an’izany na ny fialam-boly natao ho an’ny ankizy aza. Tokony hanao izay fara heriny àry ny ray aman-dreny mba hampianatra ny zanany momba an’i Jehovah Andriamanitry ny fiadanana, izay hanafoana ny herisetra. (Salamo 11:5; 37:10, 11) Tsy ho voatarika hanao ratsy ny zanany amin’izay. Nahavita nanao an’izany i Noa mivady. Lasa tia an’i Jehovah ny zanany lahy rehefa lehibe. Olona tia an’i Jehovah koa no nalain’izy ireo ho vady, ary samy niezaka izy ireo mba hanao izay tian’i Jehovah alohan’ny zava-drehetra.
Nilaza tamin’i Noa i Jehovah, indray andro, fa nikasa handringana ny olona ratsy izy. Niova tanteraka ny fiainan’i Noa nanomboka tamin’izay. Izao no baiko nomen’Andriamanitra azy: ‘Manaova sambofiara ho anao amin’ny hazo misy ditiny.’—Genesisy 6:14.
Misy milaza fa hoatran’ny sambo fahitantsika ihany io sambofiara io. Tsy marina anefa izany satria tsy nisy lohan-tsambo sy vodisambo ilay izy, ary tsy nisy zavatra namiliana azy. Tonga dia mahitsizoro hoatran’ny vata be koa ilay sambofiara, fa tsy nisy nilempona na niolaka. Nolazain’i Jehovah tamin’i Noa tamin’ny an-tsipiriany ny refiny sy ny paoziny, ary nasainy nolalorina godorao ny atiny sy ivelany. Nolazainy taminy avy eo ny antony hoe: ‘Hahatonga safodrano eny ambonin’ny tany aho, dia ho faty ny zava-drehetra.’ Hoy anefa izy tamin’i Noa: “Midira ao anatin’ny sambofiara ianao sy ireo zanakao lahy sy ny vadinao ary ireo vadin’ny zanakao.” Nasainy naka tamin’ny karazam-biby rehetra koa i Noa. Izay ao anaty sambofiara ihany mantsy no ho tafavoaka velona amin’ilay Safodrano.—Genesisy 6:17-20.
Asa be no niandry an’i Noa satria ngezabe ilay sambofiara. Tokotokony ho 133 metatra ny lavany, 22 metatra ny sakany, ary 13 metatra ny haavony. Lehibe lavitra noho ny sambo ngeza indrindra vita amin’ny hazo amin’izao fotoana izao io sambofiara io. Nanao izay nialana tamin’ny asa nasaina nataony ve anefa i Noa? Nitaraina ve izy hoe sarotra loatra ilay izy? Novany ve ny fomba nanamboarana an’ilay izy mba ho mora kokoa ny hanao azy? Hoy ny Baiboly: “Nanao araka izay rehetra nandidian’Andriamanitra azy i Noa. Izany indrindra no nataony.”—Genesisy 6:22.
Efa ho 40 na 50 taona angamba ilay sambofiara vao vita. Nila nanapaka sy nibata hazo be dia be ry Noa, ary nandrafitra an’ireny mba hisy endriny sy hitambatra. Nila nasiana efitrefitra sy rihana roa ilay sambofiara. Tsy maintsy nasiana varavarana iray koa tamin’ny lafiny ilany ary varavarankely maromaro teny amin’ny rihana ambony indrindra. Azo antoka koa fa nisolampy ny tafon’ilay sambofiara, izany hoe natao niakatra kely ny teo afovoany mba tsy hiangonan’ny rano.—Genesisy 6:14-16.
Nihanisy endriny ilay sambofiara rehefa nandeha ny fotoana. Azo antoka fa faly i Noa satria nanampy be azy ny fianakaviany. Nisy asa hafa nasaina nataony koa anefa, ary sarotra noho ilay nanamboatra sambofiara angamba izany. Milaza ny Baiboly fa “mpitory ny fahamarinana” i Noa. (2 Petera 2:5) Sahy nampitandrina ny ratsy fanahy àry izy hoe kely sisa dia handringana azy ireo Andriamanitra. Nihaino an’i Noa ve ireo olona ireo? Nilaza i Jesosy tatỳ aoriana hoe “tsy niraharaha izy ireo.” Variana tamin’ny fiainany andavanandro izy ireo, izany hoe nihinana sy nisotro ary nanambady. (Matio 24:37-39) Azo antoka fa nisy tamin’izy ireo naneso an-dry Noa mianakavy. Ny sasany aza angamba nampitahotra na nanohitra be azy ireo mihitsy.
Mbola naneso sy tsy niraharaha ny zavatra nolazain’i Noa ihany ny olona, na dia efa hita be aza hoe notahin’i Jehovah izy
Tsy nitady afa-tsy izay hahasoa azy teo amin’ny fiainany ny olona niara-niaina tamin’i Noa. Nihevitra ry zareo fa adala sy diso hevitra ry Noa ary tsy nisy nilana azy ilay sambofiara. Tsy nilavo lefona mihitsy anefa ry Noa mianakavy, fa nanohy nanamboatra an’ilay izy foana. Afaka manahaka azy ireo koa ny fianakaviana kristianina ankehitriny ka hiezaka hanana finoana matanjaka. Isika rahateo miaina amin’ilay fotoana lazain’ny Baiboly hoe “andro farany.” (2 Timoty 3:1) Efa nilaza koa i Jesosy fa hitovy amin’ny zava-nitranga tamin’i Noa nanamboatra sambofiara ny zava-misy amin’ny androntsika. Matetika ny olona no tsy miraharaha, na maneso, na manenjika mihitsy rehefa mitory ny Fanjakan’Andriamanitra isika. Mila mitadidy foana an’izay nataon’i Noa àry isika amin’ireny fotoana ireny. Tsy vao isika mantsy no tratran’izany.
Efa am-polony taona maro izay no lasa ary kely sisa dia ho vita ilay sambofiara. Efa ho feno 600 taona i Noa ary maro ny havany efa maty. Maty, ohatra, i Lameka rainy. * Dimy taona taorian’izay dia maty koa i Metosela dadabeny. Efa 969 taona i Metosela vao maty ary izy no ela niainana indrindra resahin’ny Baiboly. (Genesisy 5:27) Samy niara-niaina tamin’i Adama, ilay olombelona voalohany, i Metosela sy Lameka.
Nahazo baiko hafa avy tamin’Andriamanitra indray i Noa tamin’izy 600 taona, hoe: “Midira ao anatin’ny sambofiara ianao sy ny ankohonanao manontolo.” Nasain’Andriamanitra nampiditra karazam-biby tao anaty sambofiara koa i Noa. Tokony haka fito avy izy, amin’ny biby madio fanao sorona, ary roa avy, amin’ny karazam-biby hafa.—Genesisy 7:1-3.
Azo antoka fa nahafinaritra be ny nahita an’ireo biby an-jatony nirohotra nankao anaty sambofiara. Tao ny nandady, nijaikojaiko, niresaresa, nitsoriaka, ary nanidina. Ary dia samihafa tokoa ireto izy! Misy ngezabe, nefa misy kely dia kely. Na ny paoziny aza samy manana ny azy. Ny sasany koa masiaka fa ny sasany malemy paika. Aza mieritreritra anefa hoe nila nobedesina ireo bibidia na koa nila notambatambazina vao nanaiky. Tsy sahirana akory mantsy i Noa, satria milaza ny Baiboly fa “niditra tao anatin’ny sambofiara” daholo izy ireo.—Genesisy 7:9.
Mety hisy hilaza anefa hoe: ‘Ahoana koa no hetezan’izany? Ary ahoana no ahafahan’ireo biby ireo hiaraka ao amin’ny toerana iray ka tsy hifandramatra?’ Eritrereto anefa izao: Tsy ho vitan’ilay Mpamorona an’izao rehetra izao ve ny hifehy ny biby noforoniny, ka hamolaka azy ireo mba ho mora baikoina? Tadidio fa efa nampisaraka ny Ranomasina Mena i Jehovah Andriamanitra. Nisy fotoana koa nataony tsy nihetsika ny masoandro. Dia tsy ho vitany ve ny hanao an’ireo zavatra resahina ao amin’ny tantaran’i Noa ireo? Vitany izany ary tena nataony!
Afaka nampiasa fomba hafa Andriamanitra mba hanavotana ny biby. Tsy izany anefa no nataony satria te hampahatsiahy antsika izy hoe matoky antsika. Efa hatrany am-piandohana mantsy ny olombelona no nasainy nikarakara tsara ny zavamananaina tetỳ an-tany. (Genesisy 1:28) Be dia be àry izao ny ray aman-dreny mampiasa ny tantaran’i Noa mba hampianarana ny zanany hoe tena tian’i Jehovah ny olona sy ny biby noforoniny.
Nilaza tamin’i Noa i Jehovah fa herinandro sisa dia ho tonga ny Safodrano. Azo antoka fa somebiseby erỳ ry Noa nandritra izany. Tsy maintsy nandamina tsara ny biby sy ny sakafony izy ireo. Nila notaterina tao anaty sambofiara koa ny entan-dry zareo. Ny vadin’i Noa sy ny vinantovaviny indray mety ho sahirana nikarakara ny tao anatin’ilay sambofiara, mba ho azo iainana sy hahafinaritra tao.
Inona kosa no nataon’ny olona nanodidina azy? Mbola “tsy niraharaha” ihany izy ireo na dia efa hita be aza hoe notahin’i Jehovah i Noa sy ny ezaka mafy nataony. Tsy maintsy hoe nahita an’ireo biby nirohotra tao anaty sambofiara izy ireo. Tsy tokony hahagaga antsika anefa raha tsy niraharaha izy ireo. Tsy miraharaha koa mantsy ny olona maro ankehitriny, na dia efa hita mibaribary aza hoe efa kely sisa dia horinganina ity tontolo ratsy ity. Efa nilaza koa ny apostoly Petera fa hisy olona haneso an’izay manaraka ny fampitandreman’Andriamanitra. (2 Petera 3:3-6) Azo antoka fa nisy naneso koa ry Noa.
Nisy farany anefa izany! Milaza ny Baiboly fa rehefa tafiditra tao anaty sambofiara ry Noa sy ny biby, dia “nohidian’i Jehovah ny varavarana.” Tsy maintsy nangina izay olona teo akaikikaiky teo nahita an’izany, raha toa ka anisan’ny naneso an-dry Noa izy ireo. Raha tsy izany no nampangina azy ireo dia ny orana nilatsaka. Tsy nitsahatra intsony ny orana raha tsy efa difotra ny tany, araka ny efa nolazain’i Jehovah.—Genesisy 7:16-21.
Maty daholo ny mpanao ratsy rehetra. Tsy hoe faly anefa i Jehovah tamin’izany. (Ezekiela 33:11) Izy aza efa nanao izay ho afany mba hiovan’izy ireo sy hanaovany ny tsara. Ary afaka nanao an’izany mihitsy izy ireo satria i Noa aza nahavita nanao ny tsara. Niara-nandeha tamin’i Jehovah i Noa ary nankatò azy foana. Nasehony tamin’izany fa afaka ny ho voavonjy koa ireo olona ireo. Tena nanam-pinoana izy, ka voavonjy izy mianakavy. Toy ny hoe nanameloka an’izao tontolo izao izy satria nampibaribary ny faharatsian’ny olona ny zavatra nataony. Raha manam-pinoana toa an’i Noa koa ianao, dia mety ho voavonjy ianao sy ny fianakavianao. Afaka miara-mandeha amin’i Jehovah Andriamanitra toa an’i Noa ianao ka ho lasa namany, ary ho namany mandrakizay mihitsy aza.
^ feh. 10 Ela velona lavitra noho isika amin’izao ny olona tamin’izany. Mbola akaiky an’ilay fotoana nahalavorary sy nampahatanjaka be an’i Adama sy Eva mantsy izy ireo.
^ feh. 20 Nataon’i Lameka hoe Noa ny anaran’ny zanany lahy. Toa midika hoe “Fitsaharana” na “Fampiononana” izany. Nozonin’i Jehovah mantsy ny tany ary niasa mafy ny olona rehefa nikarakara azy io. Naminany àry i Lameka hoe hanatanteraka ny dikan’ny anarany i Noa ka hitondra fitsaharana ho an’ny olombelona. (Genesisy 5:28, 29) Efa maty anefa i Lameka vao tanteraka izany.